I-anti-virus light down jacket ivikela umndeni wakho
I-antimicrobial kanye ne-antiviral light down jacket: igciwane liyisidalwa esincane, esilula esiqukethe uhlobo olulodwa kuphela lwe-nucleic acid (i-DNA noma i-RNA) okumele lihlale kumaseli e-linving futhi lande ngokuziphindaphinda. nginga ...
Inoveli Coronavirus Epidemic Prevention Measure 1 、 Umphakathi jikelele ungazivikela kanjani kubhadane lwe-pneumonia? 1. Nciphisa ukuvakashelwa ezindaweni ezinabantu abaningi. 2. Faka umoya njalo egumbini lakho ekhaya noma emsebenzini. 3. Njalo gqoka isifihla-buso uma une-f ...
Joyina iHigg Index
I-Higg Index Ethuthukiswe yi-Sustainable Apparel Coalition, i-Higg Index iyithuluzi lamathuluzi avumela imikhiqizo, abathengisi, nezinsiza zabo bonke osayizi - kuzo zonke izigaba ohambweni lwabo lokusimama - ukukala ngokunembile noku ...